Ampio Mividy fiara Ampiasaina amin'ny alalan'ny fanaovana A Vin Number Lookup
Tonga soa eto amin 'ny tranonkala sy ny misaotra noho ny fitsidihana. Ny toerana dia ny momba ny zava-drehetra eo amin'ny kodiarana, kokoa manokana, maotera kodia! Omanintsika ny hanome anareo ny tsara indrindra vaovao momba ny fiara sy ny tolotra.
Zavatra iray fa isika dia hifantoka amin'ny tena dia mividy nampiasa fiara, na ny fiara na ny kamiao, môtô, ATV na RV sy ny fomba tsara indrindra hiarovan-tena. Tsara tarehy be toy izany rehetra mihatra amin'ny rehetra ny fiara voatanisa etsy ambony rehefa mividy fiara ho ampiasaina, elaela eo ny misy RV mety ho vitsy kokoa ny zavatra tokony hijerena.
Misy dingana maromaro tokony handray amin'ny fividianana ny fiara ampiasaina na kamiao. Ataovy ny asa takiana amin'ny famakiana mpanjifa fiara sy ny mpanjifa fiara famerenana tatitra. Angataho ny olona izay miasa miaraka sy ny namany momba ny fiara hafa modely. Manangona fanazavana momba ny entona fanjifàna ny hanao sy modely ianao liana amin'ny fividianana. Jereo fa azo itokisana ny tsirairay ratings fiara sy manao kajy ny costs.Most ny olona mahafantatra fa mividy ny fiara ampiasaina dia toy nanakodia ny dice. Na izany aza, manaraka ny dian'ny fiara ampiasaina lisitra iray dia iray amin'ireo fomba tsara indrindra hiarovan-tena, ny vola sy hanampy hampihenana ny loza mety hitranga.
Misy bunch ny zavatra izay tokony ho fizahana sy teny amin'ny fiara ampiasaina fa ianao mieritreritra mividy. Jereo ny fiara ny, no mila kodiarana? No hitanao menaka harambato voasaron-drano eo amin'ny tany ambany? Test handroaka ny fiara, rehefa mampihatra ny freins, ny fiara no hanaisotra amin'ny lafiny iray na ny hafa? Raha tsy mijery ireo zavatra ireo sy ny maro hafa mety lany harena anao ho tanteraka. Ny iray amin'ireo zavatra manan-danja indrindra mba handinika amin'ny fiara ampiasaina lisitra izay azonao atao ny tenanao dia hanamarinana ny fiara tantara.
Mividy iray mialoha nanana fiara na ny kamiao tsy hafa ianao na avy amin'ny tsy miankina nividy antoko na ampiasaina mpivarotra fiara, afa-tsy ny zava-misy mba mandoa vola bebe kokoa noho ny fiara avy amin'ny mpivarotra. Nampiasa fiara mpivarotra matetika no iray amin'ireo mampiasa ny teknisiana fiara efa nampiasaina lisitra ny maso sy hijery ny fiara izay nividy amin'ny lavanty, na varotra in, ary avy eo dia mamaritra ny fiara raha azo amidy eny an-be na tsia. Misy fiara izay varotra ao, ary dia tanteraka tratran'ny mpanara dia hamidy amin'ny lavanty, ary ny sasany ho amin'ny mpivarotra nivarotra tamin'ny filokana. Ary Eny, dia ny fiara izay manana olana sy ny olana mekanika no hamidy eo amin'ny mpivarotra ny be sy ny mety ho ilay iray izay miafara ny mividy iray amin'ireo fiara izay manana olana. Angataho ny mpivarotra mba hasehoko anao ny fiara toe tatitra fa efa preformed teo amin'ny fiara, na ny fiara toe tatitra fa efa novidiny ho ny fiara ianao mieritreritra hividy.
Nampiasa fiara amidy avy amin'ny sehatra tsy miankina (amidy ny tompony) Tena manintona ny mety ho mpanjifa noho ny eritreritra fa ny fiara efa araka ny tokony ho nikarakara teo amin'ny tompony, ary fa afaka mahazo ny tena fifanarahana fa raha mividy izany mivantana avy amin'ny tompony raha oharina amin'ny fiara sy kamiao izay efa nivarotra ny fiara ampiasaina dealerships. Olona izay mivarotra ny fiara teo ny tsy manana ny lany rehetra fa ny mpivarotra manana. Izany dia mamela nampiasa fiara izay amidy amin'ny tompony mba lafo be manontolo latsaky ny fiara mitovy amin'ny ampiasaina mpivarotra fiara.
Na mividy avy amin'ny olona tsy miankina dia mety ho kely kokoa mampidi-doza. Tokony ho zava-dehibe amin'ny na tsia ny odometer efa hosimbaina. Ary miaraka amin'ny tsy miankina sy ny mpivarotra mpivarotra tokony ho zava-dehibe na tsia ny fiara dia efa ratsy, na tsy loza. Ary miaraka amin'ny tsy miankina mpivarotra, izy ireo no tena manana ny fiara (dia ny fiara nangalatra)?
Ny iray amin'ireo zavatra tsara indrindra azonao atao mba hiarovana ny tenanao avy any amin'ny ambony dia ny mandeha an-tserasera sy handinika ny fiara-tserasera. Hanampy mampitandrina anao mba azo atao odometer tampering, lehibe ny loza ary raha ny fiara no nangalatra na tsia.
Ary farany, zavatra iray tokony hatao alohan'ny mividy ny fiara no hanontany raha afaka manana ny fiara teny nivoaka tamin'ny herinao mpanamboatra. Antenaina fa manana mpanamboatra izay matoky sy hanome ny fiara indray mandeha tsara ny sy hampitandrina anao amin'ny olona mety ho olana.
Mijanona miala amin 'ny toerana tahaka ny eo fanorenana ary dia foana ho fanavaozana izany ary manome anao amin'ny fanazavana sarobidy.
Ity misy lahatsary lehibe hitanay izay manome fanazavana ny zavatra manan-danja mba hitady rehefa mividy fiara ho ampiasaina –